China Wt003 milina palitao sy mpanamboatra | Eigday
FARITRA HEATINGANA LARGER - ny palitao mafana dia misy takelaka fanafanana 30% lehibe kokoa raha oharina amin'ny hafa eny an-tsena. Ireo singa manafana fantsona karbaona manify indrindra dia miteraka hafanana manerana ny sorony ankavia sy ankavanana, ny lamosina sy ny havia ary ny havanana amin'ny hafanan'ny vatana. Amboary ny fanafana fanafanana 3 (Avo, salasalany, ambany) amin'ny tsindry bokotra tsotra fotsiny
FANDROSOANA 10 JAM-Famindroana haingana ao anatin'ny segondra miaraka amin'ny bateria voamarina 7.4V 5200mAh. Miasa hatramin'ny 8-10 ora (ambany), 5-6 ora (med), 3 ora (avo) amin'ny fiampangana tokana.
Zipera matevina avo lenta, tantera-drano sy tantera-drano, mafana kokoa
NEW SILVER MYLAR THERMAL LINING-Upgrade HEAT SYSTEM, miantoka anao tsy hahavery hafanana be loatra ary hankafy hafanana bebe kokoa. Tsy azo antoka ny akanjo mafana sy mafana.
Fomba hainganana haingam-pandeha sy ny halavany farany: manatsara ny fihemorana alohan'ny fanafanana taloha ary mamela ny mpampiasa hahatsapa hafanana afaka segondra. Hatramin'ny 8 ora ny fihazakazahana amin'ny toerana ambany.
Waterproof and Breathable: ny famonoana rano maharitra maharitra dia nampiana amin'ny lamba hanamafisana ny fanoherana ny rano fa aza mampihena ny fofonain'ny fofonaina farafaharatsiny.
Ataovy mafana kokoa noho ireo mpifaninana amin'ny tsena hafa: ny sosona matevina ao anatiny miaraka amin'ny volon'ondry dia mitazona ny hafanana manodidina ny mpampiasa ary manakana ny rivotra mangatsiaka, izay mety ihany koa ho an'ny famonoana tontolo iainana mangatsiaka kokoa.
Mety amin'ny hetsika rehetra ary fanomezana tsara ho an'ny mpianakavy, namana, mpiasa.
FANASANANA MESINY-Fikarakarana mora: azo nosasana ny masinina; Ny singa fanamainana sy ny fananganana palitao dia natao hiaretana tsingerin'ny fanasana milina 50+.
Fanamarihana: Aza mba maina maina. Alohan'ny hanasana lamba dia ataovy ao am-paosinao ny tariby DC, ary esory ny batterie finday. Alohan'ny hampiasana azy indray dia alao antoka fa tsy misy mandomando ny sakana terminal DC ary maina foana.
Ny fonosana dia misy 1pcs * Palitao efa nohafanaina, 1pcs * Kitapo fanasan-damba, 1 pcs * kitapo PE, 1mm * charger, 1 pcs * manual, 1pcs * desiccant, 1 bateria * batterie.
Teo aloha: Palitao WT002
Manaraka: Palitao Wt004